धेरै संगठन संख्यात्मक परिचायक हो विस्तारहरू विभिन्न विभाग संग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। तथापि, सदस्य कहिलेकाहीं त्यहाँ कठिनाइ छन्, विशिष्ट कर्मचारी जोडिएको हुन छ। अक्सर समस्या एक मोबाइल फोनबाट कल छन् गर्नेहरूलाई मा आउँदैन।
कसरी एक विस्तार गर्ने निर्धारण गर्न अघि?
पहिले मोबाइल बाट एक विस्तार नम्बर डायल, तपाईं यसलाई तपाईं को सामने छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छ। सम्पर्क जानकारी केही संख्या, सामान्यतया कोष्ठकमा संलग्न जो मुख्य कोठा पछि निर्दिष्ट विस्तार देखि धेरै कम्पनीहरु को विभाग लागि। वा तिनीहरूको अगाडि शब्द "विस्तार" लेख्नुहोस्। तिनीहरूले कर्मचारी आईडी वा विभाग, को पीबीएक्स जडान यन्त्र सिरियल नम्बर निर्धारण गरिन्छ जो छन्। यस मामला मा पीबीएक्स, भर्चुअल हुन सक्छ, र गर्न फर्वार्ड बहु नम्बर कल "स्काइप", मोबाइल र पारंपरिक गर्न landlines, जो विभिन्न शाखा छन्।
मोबाइल बाट एक विस्तार नम्बर कसरी डायल गर्न?
शहरी निश्चित उपकरण मोबाइल फोन विपरीत स्वतः हस्तान्तरण गर्दै टोन मोड। को स्थिर मिसिन अघि एक विस्तार टेलिफोन नम्बर डायल, तपाईंले * प्रेस पर्छ, र यो उहाँको स्वर मोड जानेछ। जडान अपरेटर, एक उत्तर मिसिन धारण भने मात्र ड्राइव को एक सेट लागि प्रदान गरेको फोन यी नम्बरहरूमा कल मा कठिन र सम्भव हुनेछ। प्रश्न स्मार्टफोन एन्ड्रोइड वा आइओएस को मालिक देखि आउनुहोस्। एक कल मा प्रमुख तथ्याङ्कले सामान्यतया गुना। र तपाईं, एक मोबाइल संग विस्तार नम्बर डायल अघि प्रतीकात्मक प्रतिमा थिचेर स्क्रिनमा यो किबोर्ड कारण गर्न आवश्यक छ। संग फोन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम, तल बाट - यो दस साना वर्गहरूको, तीन पङ्क्तिहरू मा शीर्ष मा अवस्थित छ नौ जो को रूप मा एक प्रतिमा, र अर्को छ। आफ्नो मोबाइल मा अतिरिक्त अंक डायल गर्दा, तपाईंले वक्ता देखि विशेषता ध्वनि सुन्न हुनेछ।
विस्तार मिश्रित दुई भिन्न
पहिलो मामला मा तपाईं मुख्य नम्बर डायल गर्न कल गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि एक अपरेटर वा उत्तर मिसिन लागि प्रतीक्षा र पूर्ण सन्देश सुन्न। कि पछि, तपाईं विस्तार संख्या डायल गर्नुपर्छ, र यो जडान। के तपाईं गलत विभाग प्राप्त गर्न र एक व्यक्ति स्विच गर्न इन्कार फोन जवाफ भने फिर्ता कल गर्न आवश्यक हुनेछ। जबकि कलरहरू गर्न सामान्यतया पर्याप्त कर्मचारी वफादार र कल ठूलो कम्पनीहरु इच्छित विभाग हस्तान्तरण गरिएको छ। मोबाइल बाट एक विस्तार नम्बर डायल गर्न कसरी दोस्रो विकल्प - यो सन्देशको लागि प्रतीक्षा गर्दैन र तुरुन्तै अतिरिक्त अंक प्रविष्ट जारी। यस मामला मा, सम्भावित लिंक विफलता वा दोष देखा परेको छ। आधुनिक प्लेटफर्ममा आधारित स्मार्टफोन को मालिक हुन सक्छ सम्पूर्ण सन्देश सुन्न समय कम।
तपाईं एक स्मार्टफोन छ भने एक मोबाइल रूपमा, एक विस्तार नम्बर डायल?
मोबाइल फोन को मालिक को लागि जडान संग फोन सुरु को खाता अपरेटर बाट पैसा झिक्न एक समस्या बन्दछ। तसर्थ, कल लाइन छ भने निःशुल्क, प्रयोगकर्ताहरूले विभाग र कोठा को नाम संग सन्देश सुनेर बिना गर्न खोज्नुभएको छ। फोन स्मार्ट को मालिकहरूले पज बटन प्रयोग कुनै पनि विस्तार डायल गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न, तपाईं, आवश्यक अंक डायल जडान लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि म पज क्लिक गर्नुहोस् (आफ्नो प्रतिमा सामान्यतया कल स्क्रिनमा स्थित छ) र अतिरिक्त अंक प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईं पूर्व-पज बटन थिचेर बिना जडान पछि तुरुन्तै टाइप सुरु गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो विकल्प सधैं काम गर्दैन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि त्रुटि यदि यो अड्किनुहोस् र फिर्ता कल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। अब तपाईं मोबाइल फोन विस्तार नम्बर डायल गर्न कसरी थाहा छ, यो हो।
"IPhone बन्द, iTunes जडान छ": डाटा को हानि बिना आईफोन5अनलक कसरी?
Samsung 5360: प्राविधिक विनिर्देशों र समीक्षा
मोबाइल फोन फ्लाई FF301: विशेषताहरु र समीक्षा
फोन "लेनोभो S850": ग्राहक समीक्षा
सबै भन्दा ठूलो स्मार्टफोन को अवलोकन
पौराणिक कथाहरु। Moloch: जसले छ?
को नुनीन मा कुकी नुस्खा, वा सिक्न कति चाँडो एक स्वादिष्ट मिठाई सरल सामाग्री बनाइएका बनाउन
माटोको सीमाना गोंद कसरी र के गर्ने?
बोलीको प्रकार र भाषण oratorical को प्रकार
कसरी चरणमा एक पेन्सिल एउटा केटी आकर्षित गर्न?
पहिले के आविष्कार गरिएको थियो: मोमबत्ती वा गिलास? आविष्कारहरूको इतिहास
के पेट्रोल को मूल्य मा वृद्धि लिङ्क? 2017 मा थप महंगा पेट्रोल हुनेछ?
जंगली कुकुर: फोटो। कुकुर को जंगली नस्ल के हो?
टाटु "फूल": मान। कस्तो फूल टाटु बालिका लागि उपयुक्त छ?
DVR थानेदार-मलाई कम्बो 1: अवलोकन, विशेषताहरु र मूल्यांकन